Sagal Radio Services • News Report • October 22, 2019
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka dalbatay hay'adda samafalka in deg deg loo caawiyo dadka barakacay fatahaadda ay sameynayaan Wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Somali News Update
Banaanbax loogaga soo horjeeday Maamulka gobolka Hiiraan oo ka dhacay Beledweyne
Sagal Radio Services • News Report • February 24, 2019
Banaanbax loogaga soo horjeedo maamulka gobolka Hiiraan ayaa maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Yuusuf Dabageed oo digniin u diray dadka reer Hiiraan ee u Dacwad taga Maxkamadaha Al-Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • September 29, 2018
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar (Yuusuf Dabageed) ayaa uga digay dadka reer Hiiraan inay u dacwad doontaan Maxkamadaha Al-Shabaab.
Madaxweyne Waare oo shir jaraa’id ku qabtay biyo dhexdooda, kana hadlay fatahaada Beledweyne (Daawo)
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay fataadaha wabiga Shabeelle uu ku sameeyay xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne, isagoo ku baaqay in gurmad lala soo gaaro dadka ka barakacay fatahaada.
Wareegto kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Hirshabelle ayaa shaqada looga joojiyey duqii magaalada Baladweyne, Cali Cabdi Mahad Alle.
Guddoomiyayaasha baarlamaannada Jabuuti iyo Soomaaliya oo soo gaaray magaalada Beledweyne
Wafdi ay horkacayaan gudoomiyayaasha Baarlamaannada Soomaaliya iyo Jabuuti Maxamed Cismaan Jawaari iyo Maxamed Cali Xamud ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.